Ezona ncwadi zi-3 zigqwesileyo nguJuan Carlos Onetti › Juni 2022
Engacimiyo UJuan Carlos Onetti, ecaleni kwe UMario Benedetti y Eduardo Galeano, Yenza i-triumvirate yombhalo ukusuka kwi-Uruguay yabo eqhelekileyo ukuya kwi-Olympus yeeleta ngeSpanish. Kuba phakathi kwezi zintathu bagubungela yonke into, naluphi na uhlobo kwiprozi, ivesi okanye eqongeni.
Nangona nganye inikezela lo mbhalo ubhaliweyo kunye nokungazinzi okubalisayo (ngaphaya kweelebheli ezijika ezondla ngeziganeko ezingaphezulu kwendawo okanye ixesha lokuzama ukumanya okanye ukubeka emgangathweni), kuyinyani ukuba iimeko ekwabelwana ngazo zenkulungwane yamashumi amabini zibekwe apha naphaya kumahla ndinyuka ezopolitiko nakwezoqoqosho kuzo zonke iintlobo zehlabathi ezikhombe kubumbano lwehlabathi kunye nokuphindaphindeka kwayo yonke ingxaki, ngamanye amaxesha ibisebenza ngemvumelwano yendalo.
Ummangaliso wase-Uruguay owenza ilizwe lezi zazi zintathu wema njengeyona iphucukileyo de kwaba phakathi kwinkulungwane yama-29, waqala ukubandezeleka ngeengxaki ze-XNUMX kwaye wagqibela ngokuwa ngeemfazwe ezimbini ezalandelayo.
Uzwilakhe lomkhosi wama-70s afunyanwa kwaba babhali bathathu amazwi abalulekileyo, acatshulwe kaninzi kwaye athunjwa njengekuphela kwendlela. Ukwabelana ngamanqaku abalulekileyo abonisa kwiincwadi zakhe izinto ezingafaniyo zeziphiwo zakhe zobuchule ekugxekeni nasekugxotheni.
Kodwa u-Onetti walatha kwinto ethile ekhethekileyo. Kungenxa yokuba wayenobunkunkqele ngakumbi nangaphambi kokubhukuqwa kweBoldaberry. Kususela kowe-1939 ukuya kowe-70 ixesha apho u-Onetti wakwazi ukubhala eyona misebenzi yakhe mikhulu, kunye nokuqaqamba okukhoyo phakathi kwezimangalo ezinomdla ezivela kwisixeko sakhe esasiyilwe, iSanta María, apho abalinganiswa bafika bevela kwezinye iindawo zokwenyani, kumdlalo wezibuko bambalwa ababhali abanokuphinda ngobuchule obufanayo.
Iincwadi ezi-3 eziphezulu ezinconyelwe nguJuan Carlos Onetti
Bonke abafundi be-Onetti bathatha ubungangamsha bobugcisa obubalaseleyo, beso sibhakabhaka sihlatywe ngumbali. Nangona ndingakuthandi ukwenza ngokubanzi, ndiyakholelwa ukuba andiphazami ekujoliseni kwelo nqanaba akusafikelelwa kwimisebenzi yangaphambili okanye kamva.
UJuan María Brausen noStein bajongana nomsebenzi wokuvala isicatshulwa sefilimu. Ibali elimiselweyo liya kwenzeka eSanta María. Kwaye apho uJuan María ukhangela abalinganiswa ekufuneka beze ebomini ukuze ekugqibeleni balandele iqhina lembali yabo.
Kancinci kancinci uBrausen ubandakanya ibali ebomini bakhe ngelixa eprinta ubomi bakhe kwingxelo. Ubuninzi bipolarity yombhali benza imeko entsonkothileyo negqibeleleyo.
Isizathu sikaSanta María sokufihla ityala, ukophuka kwentliziyo kunye noloyiko phakathi kwezitalato ezenziweyo. Abalinganiswa ababonakala ngathi banezitshixo ezivula iingcango kwinyani yeBrausen kunye neBrausen eyandisa amaphupha akhe kunye nengcinga eguqukileyo yaba siskripthi sokufumana imeko kunye nobomi, njengaleyo iphupha lakudala lokubona abanye bephila kwaye bonwabile ukonwaba kwabanye, ukupaka izinto zakho ngokwenyani kuguquke intsomi.
Indawo yokugcina iimpahla
Xa uthetha nomntu malunga no-Onetti, kwaye ngaphandle koku kungasentla malunga nobugcisa obunokubakho, abanye abafundi abaninzi bacaphula lencwadi yokuqala. Iya kuba yenye yezona meko zakhe zilawulekayo kwihlabathi lethu elingwevu.
Ngandlela thile, kubonakala ngathi kunqwenela ukuya kwindawo ebuntsomi njengeSanta María, enokuthi ikhanye phakathi kobutyebi okanye ukonwaba kwaye iphele ifumana usizi olufanayo.
Kodwa yile, njengoko ababhali abaninzi bebeka izimvo ngezihlandlo, ukudana ngowona mthombo mkhulu wokhuthazo. Ukubola kunye ne-nostalgia kukugcina kukudakumba woyilo okoko nje bengakukuntywilisi. Kwaye u-Onetti wayeyinkunkqele kuloo ntlanganiso yeentsomi ezixelisa iimvakalelo ezibuhlungu kwihlabathi lethu.
Abalinganiswa bashukunyiswa yi-inertia engenaziqhamo kwihlabathi eligugileyo. Iinqanawa ezithunyelwa ngeenqanawa ezine-echoes zokuchuma ezihlaba izazela zitshone.
Nje ukuba u-Onetti afunyenwe, kufanelekile ukuba ume kule noveli imfutshane inento yokwenza nengxelo yayo yonke inyaniso, ubungqina obubambekayo bombhali. U-Onetti ngokwakhe uwuchaze lo msebenzi njengowuthandayo, ngamanye amaxesha. Kufuneka kubekho isizathu.
Inqaku lelokuba umlinganiswa ophambili webali inokuba ngu-Onetti ngokwakhe, ezifihle njengeyona nkwenkwana yangaphambili yezemidlalo yafika kwidolophu esezintabeni edume ngeempawu zayo zokunyanga isifo sephepha.
Ubume bakhe, ubukho kunye nokuziphatha kwakhe okungaqhelekanga kungekudala kwatsala ingqalelo yomntu ophethe isithuba edolophini. Ukwenza izinto zibe mbi nangakumbi, iileta ezingaqhelekanga ziye zaya kumlinganiswa ophambili abathi, njengoko bedlula ezandleni zikaposi othile wedolophu, babhale kwingcinga zabo elona bali linzulu lomlinganiswa ekugqibeleni abalekele kuloo ntlambo ithe cwaka.
Ubufutshane bale noveli, umoya wayo ozolileyo, nangona kunjalo, kunye nombono weposi oguqula ubukho bayo yonke into emngqongileyo benza umfanekiso otyhafisayo malunga nomhlala phantsi womntu ophambili kunye nokuma kobomi emazantsi ezintaba.
Iilebula UJuan Carlos Onetti, Iinoveli ezikhoyo
Izimvo ezi-4 kwi "Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zikaJuan Carlos Onetti"
Pingback: Iincwadi ezi-3 ezigqwesileyo nguJuan Tallón › Epreli ngo-2022
Pingback: Iincwadi ezi-3 ezigqwesileyo nguMario Levrero › Epreli ngo-2022
Pingback: Ezona ncwadi zi-3 zigqwesileyo nguFernando Butazzoni › Matshi 2022
Pingback: Iincwadi ezi-3 ezilungileyo nguHoracio Quiroga ›Matshi 2021